Fanatrehana ny matso tetsy Mahamasina: tsy nipoitra ireo filoham-pirenena teo aloha - ewa.mg
News - Fanatrehana ny matso tetsy Mahamasina: tsy nipoitra ireo filoham-pirenena teo aloha
Nahitana seza banga maromaro. Nanamarika ny fanamarihana ny fetim-pirenena, omaly ny tsy nahatongavan’ireo filoham-pirenena telo teo aloha niatrika ny matson’ny Foloalindahy tetsy Mahamasina. Nahazo fanasana avokoa izy ireo. Anisan’izany ny amiraly Ratsiraka, saingy nitsabo tena any Frantsa. Any ivelany koa ny filoha Rajaonarimampianina raha tsy nahazoam-baovao kosa ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc. Na izany aza, nanotrona izany ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao. Anisan’ny mpitondra teo aloha tonga teny an-toerana kosa ny filoham-panjakana, Ratsirahonana Norbert Lala. Teo koa ireo filoham-piangonana efatra mirahalahy eo anivon’ny FFKM. Ireo lehiben’ny Andrimpanjakana, nahitana ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ireo mpikamban’ny governemanta sy ny hafa koa. Ankoatra izany, ireo masoivoho vahiny miasa sy monina eto amintsika. Anisan’izany ny Frantsay, ny Amerikanina, ny Japoney, i Sina sy ny avy amin’ny Pnud ary ireo sampan-draharahan’ny Firenena mikambana rehetra eto amintsika. Eo koa ireo solontenan’ny firenena afrikanina.
L’article Fanatrehana ny matso tetsy Mahamasina: tsy nipoitra ireo filoham-pirenena teo aloha a été récupéré chez Newsmada.
Tsy takona hafenina toy ny vay an-kandrina. Izay no azo ilazana ny fomba amam-panaon’ny praiminisitra Ntsay Christian sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta hatramin’ny nipetrahan’izy ireo tamin’ny toerany amin’ny maha olom-panjakana ambony azy ireo. Miha mahery vaika amin’izao fotoana izao ny fandripahana ny harem-pirenena satria dia revo ary takona ao anatin’ny fotoam-pifidianana avokoa ny rehetra ka tsy mahatsikaritra, na inona na inona intsony. Hany ka nanaovan’ny Alliance Voahary Gasy (AGV) antso avo mihitsy ankehitriny ny fampitsaharana ny fitrandrahana sy fandripahana tsy ara-dalàna ireo harem-pirenena. Raha ny filazan’izy ireo tokoa mantsy, manomboka ripaka tsikelikely ny ala amin’ny fanaovana arina tsy ara-dalàna ao Tsaramandroso, izay toerana manakaiky ny Valan-javaboahary ao Ankarafantsika. Eo ihany koa, ary goavana ny fitrandrahana hazo sarobidy ao amin’ny Tahirin-javaboaharin’i Menabe Antimena sy ny “Allée des Baobabs” ao Morondava, izay maharipaka hatrany amin’ny 50 ha isan’andro. Ny fandorana ny Valan-javaboaharin’i Ranomafana ka ahafanan’ireo mpitrandraka hanapahana ireo hazo sarobidy ao. Ny fitrandrahana safira ao Didy, anatin’ny faritra voaaro, ny fanaovana arina ny hazo ao amin’ny Valan-javaboaharin’Andasibe, sns. Matoa tokoa misy manao fitrandrahana amin’ireny toerana ireny ary vao mainka aza miseholany izany dia avy amin’ny Fanjakana ihany. Misy tombontsoa manokan’ireo olom-panjakana ambony to any praiminisitra Ntsay Christian sy ireo mpikamban’ny governemanta misahana izany izao fandripahana tsy ara-dalàna ary miseholany eto amin’ny firenena izao. Izany hoe, ny Fanjakana amin’ny ankapobeny mihitsy no manome vahana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena, amin’izao fotoana izao. Hita ary tsapa, araka izany, fa miverina ny gaboraraka eto amin’ny firenena noho ny hafitsoky ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny governemanta tarihiny amin’ny fitiavana tombontsoa manokana. MN L’article Praiminisitra Ntsay Christian : Mandripaka ny harem-pirenena est apparu en premier sur .L’article Praiminisitra Ntsay Christian : Mandripaka ny harem-pirenena a été récupéré chez Triatra.
Zotra nasionaly sy rezionaly :: Fandaminana vaovao eny amin’ ny toby fiantsonan’ny taksiborosy
Tsy lavitry ny fotoana hiverenan’izy ireo amin’ny asa fitaterambahoaka ry zareo mpisehatra ao amin’ny zotra rezionaly sy nasionaly. Hifandimby kosa anefa ny fiantohana ny fitaterana amin’ireo zotra ireo, ao anatin’ny fiverenana tsikelikely, aoriana ao. Andrasana ny fandaminana raikitra momba ny fitateram-bahoaka rezionaly sy nasionaly, taorian’ny dinika teo amin’ireo mpitatitra sy ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT) natao tetsy Ambodivona, omaly. Hiankina betsaka amin’ny fivoaran’ny valanaretina Covid-19 no hiverenan’ny fitaterana rezionaly sy nasionaly amin’ny laoniny, raha ny fampahafantarana natao tamin’ireo mpandraharaha amin’ ny fitaterana avy amin’ny tobimpiantsonana Maki Andohatapenaka, Fasan’ny karàna, Antohomadinika sy Ampasampito ary ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa, izay tonga nifampidinika tamin’ny ATT. Niompanan’ny adihevitra ihany koa ny momba ny sarandalana satria azo antoka fa tsy afaka ny hameno mpandeha tahaka ny teo aloha ireo fiara mpitatitra, amin’izao fiverenana miandalana amin’ny fitaterambahoaka mampitohy ny faritra sy manerana ny Nosy izao. Fifandimbiasan’ny fiaingana “Ao anatin’io fiverenana tsikelikely io no hametrahana ny fiaingana mifandimby. Ohatra hoe ny alatsinainy maraina ny eny amin’ny tobim-piantsonana Maki Andohatapenaka, ka ireo fiara mpitatitra amin’ny lalam-pirenena fahefatra ihany no mandeha. Hisy ny famendrahana ranom-panafody, aorian’ izay. Tsy maintsy manaraka an’io fepetra io ihany koa ireo tobimpiantsonana tsy miankina mandrapiverin’ny fifamoivoizana tanteraka amin’ny laoniny”, hoy Reribake Jeannot, tale jeneralin’ny ATT. Zava-dehibe notsindriana sady naverina nampahafantarina amin’ireo mpitatitra ny momba ireo fepetra tsy maintsy harahina ho fanajana ho fisorohana ny fihanaky ny tsimok’aretin’ny Covid-19, indrindra ny famerana isan’ny mpandeha ao anaty fiara isaky ny laharan’ny seza. Tsy tokony hiova koa anefa ny sarandalana. “Hatao amin’ny finday ny fanaovana famandrihan-toerana ho fitandroana ny fivorivorian’ny olona. Mila mitovy ny saran-dalana rehetra amin’ny toerana iray ary tsy tokony hihoatra amin’ny 10 000 ariary ambonin’ny saran-dalana teo aloha ny fanitsiana ao anatin’ izao vanim-potoana izao”, araka ny fanampim-panazavana. Halefa any amin’ny minisiteran’ny Fitaterana, fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro ny volavolan-kevitra tapaka tamin’ izao fihaonana izao ka izy ireo no hanapaka farany amin’ny mety ho fiverenan’ny fitaterana. L’article Zotra nasionaly sy rezionaly :: Fandaminana vaovao eny amin’ ny toby fiantsonan’ny taksiborosy est apparu en premier sur AoRaha.
Tsy mitsaha-mirongatra…: 15 be izao no lavon’ny Covid-19, afakomaly
15 ny olona lavon’ny Covid-19 ho an’ny 30 marsa, araka ny antontanisa ofisialy nivoaka omaly. Teto Analamanga ny fito, efatra ho an’ny Boeny ary iray avy tany Atsinanana, Sava, Analanjirofo ary Sofia. Tamin’ny olona 755 nanaovana fitiliana, nahitana tranga vaovao miisa 162 ka teto Analamanga ny 107, Atsinanana nisy 18, tany Diana nahitana 12, Alaotra Mangoro roa, Boeny dimy, Atsimo Andrefana enina, Menabe iray, Analanjirofo 10 ary Ihorombe iray koa. Nahatratra 132 ireo sitrana ka teto Analamanga ny 93. Manaraka fitsaboana, amin’izao fotoana izao, 2100 ary anatin’ny tranga misy fahasarotana ny 246 amin’ireo.Nanomboka ny volana marsa 2020 ka hatramin’ny 30 marsa lasa teo, 24 426 ny tranga Covid-19 voatily teto amintsika ary 21 908 sitrana avokoa. 418 ny isan’ny lavon’ny valanaretina. 142 954 ny fitiliana vita. 33 ny isan’ny maty indray androNy 6 jolay 2020, efa nahatratra 33 ny isan’ny olona matin’ny Coronavirus tao anatin’ny indray andro rehefa nandripaka izy teto amintsika. Mbola tao anatin’ny fihibohana tanteraka ny rehetra tamin’izany fotoana izany ary niato avokoa ny asa ankoatra ny fitsaboana sy ny famatsiana sakafo ary ny fanafody. Amin’izao fotoana izao, mivahavaha ny fanajana ny fepetra ary miakatra ny isan’ny tranga misy fahasarotany. Mitady tsy haharaka intsony ny toeram-pandraisana samihafa sy ny oxyègena tena ilaina.Vonjy L’article Tsy mitsaha-mirongatra…: 15 be izao no lavon’ny Covid-19, afakomaly a été récupéré chez Newsmada.